Iyo yazvino beta yeiyo iOS 11 inotipa 1 GB yakawanda yekuchengetedza kana ichienzaniswa neyekare betas | IPhone nhau
Kusvikira gore rapfuura, Apple haina kuda kubvuma kuti haina kumira kuzviita benzi pachayo nekupa zviteshi zve16 GB, 16 GB izvo zvisati zvamboitika sezvo nzvimbo inogara nehurongwa hwekushandisa yaifanira kudzikiswa, nzvimbo yaive kwete zvishoma muchigadzirwa zvakaderera se16GB. Neraki nekuvhurwa kweiyo iPhone 7, vakomana vanobva Cupertino Vakasarudza kupa 32 GB munzvimbo dzinodhura, vachisiya 16 GB.
Asi izvi hazvireve kuti vashandisi vanotambura nemuenzaniso uyu vakanganikwa neApple, nekuti zvinoenderana nezvakaratidzwa, Apple inoenderera mberi kushanda kuyedza kudzikisa nzvimbo inogara system yekushandisa. Seumbowo tinogona kuona kuti beta yazvino yeIOS 11 inogara sei 1 GB isingasviki pane mabetas anga aburitswa parizvino.
Kune vashandisi vane 16 GB zvishandiso, zviri pasina mubvunzo inhau huru dzavanonyatsokoshesa, kubvira nzvimbo yemahara pane yedu kifaa yakakosha kwete kungokwanisa kuisa mashandisirwo chete asiwo kugona kutora mavhidhiyo kana mifananidzo, zvine kukosha kune vashandisi pamusoro peizvo zvingave, semuenzaniso, hupenyu hwebhatiri kana mashandiro aanogona kutipa.
Sezvatinogona kuona mumifananidzo yakatumirwa naRedmond Pie, ndiani akaita bvunzo, ine beta 6 yevagadziri iyo ine nhamba 15A5341f, nzvimbo yemahara yetemu iyo yavakashandisa kuita bvunzo ndeye 4,79 GB . Mushure mekuisa yazvino beta, iyo yakaverengerwa 11A5362a, iyo inowanikwa nzvimbo mune terminal yakawedzera ne1 GB, ichipa 5,73 GB yemahara nzvimbo.
Yekupedzisira vhezheni duye iOS 11 haizorove pamusika kusvika hafu yekutanga yaGunyana pakutanga, mavhiki maviri umo Apple ichaunza zviri pamutemo iyo itsva iPhone 8, iPhone 7s uye 7s Plus, pamwe pamwe neApple Watch Series 3.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Iyo yazvino beta yeiyo iOS 11 inotipa 1 GB yakawanda yekuchengetedza kana ichienzaniswa neyekare mabheta
Android Oreo inosvika uye haizogadzirise matambudziko eApple futi